တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံရသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ - Kanbawza Tai News
Home မူဆယျ ရှမျးမွောကျသတငျးမြား တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံရသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံရသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
August 01, 2019 မူဆယျ, ရှမျးမွောကျသတငျးမြား,
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးရောင်းစားခံခဲ့ရသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ဟိုနားကျေးရါာမှ လူကုန်ကူးခံရသူ မဟော်လင်ယုံ ဆိုသူအား ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းအပ်နှံလာခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းအား မူဆယ်မြို့နယ် အမျိုးသမီးပြန်လည်လက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတွင် ခေတ္တထားရှိကာ ထောက်ပံ့ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက် ပေးထားကြောင်း မူဆယ် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူး ကျော်ညွန့်က ပြောသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ လ လောက်ကတည်းကာ ပျောက်သွားတာပါ။ သူ့အစ်ကို မန္တလေး အလုပ်သွားလုပ်ရာက အိမ်ပြန်လာ တဲ့အချိန် ညီမကိုမတွေ့လို့ မေးရင်းနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ လောက်က We Chat နဲ့ အဆက်အသွယ်ရခဲ့တာပါ။ တရုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကူအညီတောင်းခံပြီး ပြန်ကယ်တင်ရတာပါ။ ကလေးတောင် ၁ နှစ်ကျော်နေပြီ. သူ့တရုတ်ယောက်ျား က ကလေးမရခင် ဖုန်းပေးမကိုင်လို့ အခု ကလေးရပြီးမှ အဆက်အသွယ်ရပြီး ပြန်ခေါ်နိုင်တာပါ။ ကလေးကိုတော့ သူ့ယောက်ျားဆီမှာပဲ ထားခဲ့ရတယ်။ သူ့အစ်မတစ်ယောက်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ပျောက်သွားတာ သတင်းအစအန မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်” ဟု ဒုရဲမှူးကျော်ညွန့်က ကမ္ဘောဇတိုင်းသို့ ပြောသည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ဟိုနားကျေးရွာနေ မဟော်လင်ယုံကို ဆွေမှိုးတော်စပ်သူ အမျိုးသမီး ၃ ဦးက ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်းက တရုတ်ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် တစ်လလျှင် ယွမ် ၃၀၀၀ ဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန် သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အန်ဟွေးပြည်နယ်၊ အန်းဟွေးရှန်းမြို့၊ ဟွေချောက်တာတွေ့ရွာရှိ တရုတ်အမျိုးသား ဝမ်ထင့်ထင့် ဆိုသူထံ ယွမ် ၁ သိန်းခွဲဖြင့် ရောင်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့ဖြစ်၍ မဟော်လင်ယုံကို တရုတ်နိုင်ငံ၌ ရောင်းစားခဲ့သူ လားရှိုးမြို့နေ ဒေါ်ရန်ဟွေ့၊ ဒေါ်ရန်ချိုက်နှင့် ဒေါ်လောက်ရှင်တို့ ၃ ဦးအား ကွတ်ခိုင်မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၃၈/၂၀၁၉၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၈ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူထားပြီး လာမည့် ဩဂုတ်လ ၅ ရက်တွင် တရားရုံး ထွက်ဆိုချက် ပေးပြီးနောက် မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ပြန်လည်အပ်နှံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတျနိုငျငံသို့ ရောငျးစားခံရသညျ့ အမြိုးသမီး တဈဦးအား တရုတျရဲတပျဖှဲ့ အကူအညီဖွငျ့ ပွနျလညျကယျတငျနိုငျခဲ့
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ကှတျခိုငျမွို့နယျမှ တရုတျနိုငျငံသို့ လူကုနျကူးရောငျးစားခံခဲ့ရသူ အမြိုးသမီးတဈဦးအား တရုတျနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့၏ အကူအညီဖွငျ့ ပွနျလညျကယျတငျနိုငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ကှတျခိုငျမွို့နယျ၊ ဟိုနားကြေးရါာမှ လူကုနျကူးခံရသူ မဟျောလငျယုံ ဆိုသူအား ဇူလိုငျလ ၂၇ ရကျက တရုတျနိုငျငံ လူကုနျကူးမှုတိုကျဖကျြရေး ရဲတပျဖှဲ့မှ ပွနျလညျလှဲပွောငျးအပျနှံလာခွငျးဖွဈပွီး လကျရှိတှငျ ၎င်းငျးအား မူဆယျမွို့နယျ အမြိုးသမီးပွနျလညျလကျခံစောငျ့ရှောကျရေးဂဟောတှငျ ခတ်ေတထားရှိကာ ထောကျပံ့ရေးကိစ်စရပျမြားကို ဆောငျရှကျ ပေးထားကွောငျး မူဆယျ လူကုနျကူးမှု တိုကျဖကျြရေးရဲတပျဖှဲ့မှ ဒုရဲမှူး ကြျောညှနျ့က ပွောသညျ။
“လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ လ လောကျကတညျးကာ ပြောကျသှားတာပါ။ သူ့အဈကို မန်တလေး အလုပျသှားလုပျရာက အိမျပွနျလာ တဲ့အခြိနျ ညီမကိုမတှလေို့ မေးရငျးနဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ လ လောကျက We Chat နဲ့ အဆကျအသှယျရခဲ့တာပါ။ တရုတျ ရဲတပျဖှဲ့ကို အကူအညီတောငျးခံပွီး ပွနျကယျတငျရတာပါ။ ကလေးတောငျ ၁ နှဈကြျောနပွေီ. သူ့တရုတျယောကျြား က ကလေးမရခငျ ဖုနျးပေးမကိုငျလို့ အခု ကလေးရပွီးမှ အဆကျအသှယျရပွီး ပွနျချေါနိုငျတာပါ။ ကလေးကိုတော့ သူ့ယောကျြားဆီမှာပဲ ထားခဲ့ရတယျ။ သူ့အဈမတဈယောကျလညျး လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈလောကျက ပြောကျသှားတာ သတငျးအစအန မရသေးဘူးဖွဈနတေယျ” ဟု ဒုရဲမှူးကြျောညှနျ့က ကမ္ဘောဇတိုငျးသို့ ပွောသညျ။
ကှတျခိုငျမွို့နယျ၊ ဟိုနားကြေးရှာနေ မဟျောလငျယုံကို ဆှမှေိုးတျောစပျသူ အမြိုးသမီး ၃ ဦးက ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ မတျလအတှငျးက တရုတျထမငျးဆိုငျတဈဆိုငျတှငျ တဈလလြှငျ ယှမျ ၃၀၀၀ ဖွငျ့ အလုပျလုပျရနျ သှေးဆောငျဖြားယောငျးချေါဆောငျ၍ တရုတျနိုငျငံ၊ အနျဟှေးပွညျနယျ၊ အနျးဟှေးရှနျးမွို့၊ ဟှခြေောကျတာတှရှေ့ာရှိ တရုတျအမြိုးသား ဝမျထငျ့ထငျ့ ဆိုသူထံ ယှမျ ၁ သိနျးခှဲဖွငျ့ ရောငျးစားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
သို့ဖွဈ၍ မဟျောလငျယုံကို တရုတျနိုငျငံ၌ ရောငျးစားခဲ့သူ လားရှိုးမွို့နေ ဒျေါရနျဟှေ့၊ ဒျေါရနျခြိုကျနှငျ့ ဒျေါလောကျရှငျတို့ ၃ ဦးအား ကှတျခိုငျမွို့မရဲစခနျးမှ (ပ)၃၈/၂၀၁၉၊ လူကုနျကူးမှု တားဆီးကာကှယျရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၂၈ (က) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ဖမျးဆီးအရေးယူထားပွီး လာမညျ့ ဩဂုတျလ ၅ ရကျတှငျ တရားရုံး ထှကျဆိုခကျြ ပေးပွီးနောကျ မိဘအုပျထိနျးသူမြားထံ ပွနျလညျအပျနှံပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။